Ndi Bayramda Bus, Metro, Marmaray n'efu na Istanbul? Eid al-Adha Ọ 2019 Ọdụ Ọha Ọha na - enwere n'efu? - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulNdi Bayramda Bus, Metro, Marmaray n'efu na Istanbul? Eid al-Adha Ọ 2019 Ọdụ Ọha Ọha na - enwere n'efu?
11 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, Ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ okporo ígwè, Funicular, General, Ụzọ Awara Awara, KENSİÇİ Rail Systems, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey, tram 0
ụgbọ ala marmaray na-akwụghị ụgwọ ezumike
Mkpebi nke Metrolọ Ọrụ Nkwuputa Obodo Obodo nke Istanbul mere mkpebi nke Onye Isi oche Ekrem İmamoğlu ga-enye ndị njem njem ọhaneze na Istanbul na Victbọchị Mmeri na thebọchị Mmeri na August 30. IETT ga-ahazi ụgbọ elu maka ụmụ amaala iji ruo ebe a na-achụ igwe mmadụ IMM.
Obodo Obodo Istanbul (IMM) mere ihe dị mkpa maka ụmụ amaala iji rie oriri udo na nke udo. Iji zere erughị ala ọ bụla na njem na mmezu nke ọrụ ịchụ aja, ìgwè ndị IMM metụtara ya ga-anọ na ọrụ n'oge ememme 7 / 24.
Mgbakọ obodo nke Istanbul, nke a kpọkọtara n'okpuru ọkwa onye isi oche nke IMM Ekrem Imamoglu na July, kpebiri inye ndị njem ọhaneze ọrụ na Istanbul n'oge Eid al-Adha na 11 Day Victory Day. Ndị omeiwu nabatara ngagharị nkwonkwo nke CHP na AK Party.
N'ime oke mkpebi ahụ, ndị njem ụgbọ njem 11-14 na Istanbul ga-eje ozi n'efu n'oge rifbọchị Àjà n'etiti August na 30 Day Mmeri nke August.
Ndị njem ga-abanye n'ụgbọ njem ọhaneze niile na-esonye na ntinye ihe Istanbulkart na akwụghị ụgwọ. A ga-akwụ ụgwọ ego niile site na mmefu ego nke obodo a na-ahụ maka ime obodo Istanbul. N’oge ugbu a, a ga-enwe ụgbọ elu ndị ọzọ iji na njem ndị ọha na eze.
ngwa; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Ewezuga Airportgbọ elu ụgbọ elu), Publicgbọ njem ọha nkeonwe, City Lines Ferry, Ọdụ Seagbọ njem Ọha Onwe nke Ugbo na okporo ụzọ ụgbọ ala Istanbul, Metro, Funicular, Ọwara na Cableway ga-adị ire.
IETT ga-ahazi oge maka ikpochapụ okpokoro
İETT guzobela ahịrị na-agafe isi ihe ndị a iji nye ohere dị mfe ịre ahịa ndị a na-egbu egbu na ebe a na-egbu egbu nke ndị IMM guzobere n'akụkụ Europe na Anatolian.
IETT European Side Kayasehir / Basaksehir, Yesilkent / Avcilar, Alibeykoy / Eyupsultan, Çakmakli / Buyukcekmece, Kestanelik / Cataca'dan, n'akụkụ ndị Anatolia nke Ferhatpasa / Atasehir, Paşaköy / Sancaktepe na Kurnaköy / Pendik a ga-achụ n'ọkụ.
iett na-ahazi njem iji ya gbuo mmadu
Bus na Metro Free n'oge Ememme Àjà na Adana 29 / 08 / 2017 Obodo ukwu Adana metropolitan mere atụmatụ maka ụmụ amaala ịga leta ili ozu n'ụzọ dị mfe. Ụgbọ mmiri ndị obodo na ụbọchị Buruk, Kabasakal, Asri, Küçükoba na ebe Akkapı ga-eme ka njem ụgbọ mmiri na-enweghị ihe ọ bụla kwuru. Site n'ógbè ochie gaa n'ili ozu, ọrụ ụgbọ ala ga-amalite na 07.30 wee gaa n'ihu ruo 17.30. Ụmụ amaala na-enwe ihe isi ike na-eje ije na-eli ozu, ebe ndị gọọmenti golf na ndị ọrụ obodo na onye ọkwọ ụgbọ ala ga-enwe ike ileta. Ụgbọ ala nke Obodo Metropolitan Munad nke Adana na metro ga-anọgide na-enyefe ndị mmadụ n'ofe obodo na Eid al-Adha. N'oge ememe nke àjà, ndị ọrụ ALO 153 ga-ekwupụta ọchịchọ, arịrịọ na mkpesa nke ndị ikpe na mpaghara ndị dị mkpa.
Ụgbọ njem ọha na eze 10 / 09 / 2016 Ụgbọ njem ndị mmadụ na Adanada Feast Sacrifice Free: Adana Metropolitan Municipality emewo njem njem ọha na eze n'efu iji nweta ebe udo karị na ime ka ọ dịkwuo mfe maka onye ọ bụla. Adanalı ụmụ amaala nke Kurban Bayrmanı'da free njem ọha na eze Adana, ajụjụ ahụ malitere n'isi ụtụtụ. N'oge ezumike nke ụbọchị 4, ụgbọ njem ọha na eze na Adana ga-n'efu. Tụkwasị na nke ahụ, Adana Metropolitan Municipality ga-ahazi ụgbọ elu ndị ọzọ na njem njem maka ebe a na-eli ozu.
Ụgbọ njem ọha na Istanbul 10 / 09 / 2016 Ụgbọ njem ndị mmadụ na Istanbul na ememme ịchụ àjà Free Mi: Istanbul Metropolitan Municipality, Ememe Kurban na ebe dị jụụ ma dị mfe ịgakwuru onye ọ bụla chọrọ ịga njem ọha na eze nke ego 50. Ụmụ amaala nke Istanbul, Kurban Bayrmanı'nda njem ọha na eze na Istanbul, azịza nke ajụjụ ahụ malitere n'oge. 4 ga-akụda 50 site na 50 maka njem ọha na eze na Istanbul n'ụbọchị ezumike. Na Istanbul, ụgbọ njem ọha, metro, tram na ferries ga-eji dị ka ọkara nke ego n'oge ememe nke àjà. Na Istanbul, a ga-eji ego XNUMX kwụọ ụgwọ njem ọha na eze. İSPARK ụgwọ na oriri nke àjà na Istanbul Kur
Ụgbọ njem na Ankara 10 / 09 / 2016 Ụgbọ njem na-ebufe n'ọdụ ụgbọ mmiri na Ankara: Obodo Ankara na-eme njem njem ọha na eze n'efu iji nweta ebe udo dị jụụ na ime ka ọ dị mfe maka onye ọ bụla ịga ebe Kurban Bayramı nọ. Ụgbọ ala ndị na-adọrọ onwe ha ga-enwere onwe ha n'oge ezumike. Ụmụ amaala Ankara Kurban Bayrmanı'nda njem ọha na eze na Ankara, azịza zara ajụjụ a n'isi. N'oge ezumike ememme 4, njem ọha na eze na Ankara ga-n'efu. A ga-eji ụgbọ okporo ígwè, metro na tram n'efu n'emeghị ihe ọ bụla n'oge a na-eri oriri ememme na Ankara. N'oge ezumike, ndị isi obodo, arịrịọ na mkpesa n'oge 7 / 24 mepee ALO 153 akara mgbe ị na-ebugharị, ndị uweojii obodo na ndị ọkụ ọkụ, ezumike Başkent
Ụbọchị Ememme Mbido nke mbụ na Erzurum Ụgbọ njem Ọha 17 / 08 / 2018 Na Erzurum, a ga-enwere ndị mmadụ n'ihu ọha n'ụbọchị mbụ nke ememme àjà. N'ụbọchị mbụ nke ememme ahụ, ụgbọ ala nke Obodo Metropolitan, ụgbọ ala ọha na eze na ndị na-arụ ọrụ n'obodo ahụ ga-ebu ụmụ amaala n'efu. Obodo obodo Erzurum, karịsịa na ọnọdụ ego nke ụmụ amaala ndị na-adịghị mma dịka mkpebi ahụ dị na nleta nke ndị di na nwunye, ndị enyi na ndị ikwu nke ọbịbịa ahụ ga-adị mfe. Buses gaa na-eli ozu ịga leta ụmụ amaala nke obodo mgbe ekpere ụlọ alakụba 57 gaa na-eli ozu mgbe ekpere ga-ewepụ. Ya mere, ọrụ njem njem ọha na eze na obodo ga-amalite na 08.30. Mgbe nleta na-eli ozu, a ga-edebe ụgbọ ala n'ebe a na-eli ozu maka ntụgharị
Ationgbọ njem Ọhaneze 30 na Istanbul na August na Eid al-Adha Free 09 / 08 / 2019 Obodo Obodo Obodo Istanbul, Eid al-Adha, 30 Day Victory Day na ụlọ akwụkwọ ga-emeghe na Mọnde na Septemba 9 ụgbọ njem ọha na Istanbul kpebiri na ha ga-enye ọrụ n'efu. Metrolọ Ọrụ Obodo Obodo Istanbul, n'okpuru ọkwa nke onye isi ala IMM Ekrem İmamoğlu'nun 2. nnọkọ. Ekrem İmamoğlu na İBB akaụntụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na mgbasa ozi na-ebi ndụ sitere na wereBB TV bụ ndị tụlere na nzukọ ahụ ma tụlere ihe dị mkpa na mkpebi. Ndi otu CHP na AK Party jikotara aka na ntinye aka, Eid al-Adha (11-14 August), Ubochi mmeri nke 30 na ulo akwukwo ga emepere 9 Septemba 2019 nke Mọnde na 06: 00- 14: 00 arasında
Ụgbọ njem ndị mmadụ na Ememme Onyinye Ọhụrụ 2 bụ Free 29 / 08 / 2017 Obodo Konya metropolitan weere ihe dị mkpa maka ụmụ amaala iji mee ka Eid al-Adha nwee udo na nsogbu. Metụtara OF ahịa ebe N'OKPURU Nlekọta Konya Metropolitan Municipality Environmental Protection na Control Department, mata ndị ahụ tara ke distrikti tara ahịa na cuttings si ahịa n'ebe ndị ọzọ, na a mara ọkwa na ọ ga-ekwe ka ọ ebipụ. Ndị na-ahụ maka ọgwụ na ndị uweojii na-ahụ maka ahụike na akwụkwọ nchịkọta akwụkwọ na-ere ahịa na ebe ndị e gburu egbu. Ụlọ ọrụ ahụ weere ihe ndị dị mkpa iji chịkọta ma hichaa ụdị mkpofu niile nke ga-eme na ahịa na ebe a na-egbu egbu n'ụzọ dị otú a ka ha ghara ịhapụ mmetọ ọ bụla gburugburu ebe obibi. ANYỊ ANYỊ NA-ANYA NA ANYỊKA Obodo obodo obodo ukwu nke obodo B
Ọfụfụ na-ezigara ọha na eze n'Ọchịchị nke Àjà 17 / 08 / 2018 Obodo ukwu Van Metropolitan, obodo ukwu na district n'oge Eid Al-Adha n'oge ezumike nke ụmụ amaala iji mee njem na-enweghị ntụsara ahụ ma dị jụụ na-agaghị agafe agafe. Obodo ndị dị na Obodo Metropolitan ga-enyefe ọha na eze n'oge ụbọchị (4, 21, 22 na 23 August). Iwere ihe ndị dị mkpa maka ụmụ amaala ka ha ghara inwe nsogbu ọ bụla na-ebu njem n'ihi ebe a na-eli ozu na ezinaụlọ na Van, Obodo Metropolitan ga-ahazi ụgbọ elu ndị ọzọ iji mee ka ndị njem ahụ gaa njem obi.
Ụgbọ njem ndị mmadụ na Bursa, Na-enweghị Àjà na Ụbọchị Mmeri 19 / 07 / 2019 Ụgbọ njem na Bursa ga-akwụ ụgwọ maka mmadụ niile n'ụbọchị nile n'etiti August na 11-14 August. A kwadoro ụbọchị 30 nke August Victory Day n'otu mgbakọ na Metropolitan Municipality Council. Ụlọ Nzukọ Ndị Obodo Metropolitan na-enwe mgbakọ nkịtị na July. Ná nzuko a na-enwe n'okpuru oche nke President Alinur Aktaş, e kpebiri inwe njem na-ezighị ezi na ezumike okpukpe na nke mba. N'ihi ya; N'oge Eid al-Adha, njem n'etiti 11-14 August ga-enwere n'efu maka ụbọchị nile na Bursa. Ụmụ amaala niile na-ebu 'Bursakart Üzerinde ga-enwe ike irite uru site na bọs obodo na nke onwe ha, karịsịa ụgbọ okporo ígwè, n'efu. Ememe nke àjà ...
50 Discounted Transport Public na Istanbul na Eid al-Adha 10 / 07 / 2018 Obodo Istanbul Metropolitan, 21-24 n'etiti August na Eid al-Adha ụgbọ okporo ígwè 50 kpebiri ịnye ọrụ ego. Obodo nke Istanbul metropolitan Municipality nwere nzuko mbu nke nzuko nke July na ulo Saraçhane. Assembly 1 IMM. Onye isi oche Ahmet Selamet, onye isi oche nke nzukọ ahụ, òtù AK na ndị òtù CHP dị na ndị Eid al-Adha 50 ụgbọ okporo ígwè kwụsịrị ịkụ. Achọpụtara, nke a na-atụle dịka Mkpebi Mkpebi, ndị otu ndị omeiwu kwadoro ya. mkpebi; 21-24 N'oge ememe nke àjà n'etiti ọnwa August, 50 na-enye ọnụahịa efu maka njem ọha na eze na ego fọdụrụnụ nke 50 maka ụgbọ ala a na-akwụ ụgwọ
Usesgbọ elu ọdụ ụgbọ elu Istanbul
Ọpụrụiche Free Fun
Idgbọ njem ọha Eid al-Adha 2019 bụ n'efu
Enwere ụzọ ụgbọ oloko n'efu
Ndi BRT n'efu
Ụgbọ njem ọha na eze
Ụgbọ njem ọha na Istanbul
Ụgbọ njem na Ankara
Ụbọchị Ememme Mbido nke mbụ na Erzurum Ụgbọ njem Ọha
Ụgbọ njem ndị mmadụ na Ememme Onyinye Ọhụrụ 2 bụ Free
Ụgbọ njem ndị mmadụ na Bursa, Na-enweghị Àjà na Ụbọchị Mmeri
50 Discounted Transport Public na Istanbul na Eid al-Adha